Hogaamiye ku xigeenkii Daacishta Soomaaliya oo lagu dilay Muqdisho. | allsaaxo online
Hogaamiye ku xigeenkii Daacishta Soomaaliya oo lagu dilay Muqdisho.
Published on October 23, 2018 by said · No Comments
Sida ay sheegayaan wararka hogaamiye ku xigeenkii dagaalamayaasha Daacish ee ka dagaalama Soomaaliya Mahad Macallin ayaa waxaa la sheegay in lagu dilay Magaalada Caasimada ee Muqdisho ah.
Xogtan ayaa waxaa laga xaqiijiyay dad ehel la ah Mahad, waxaa ayna sheegeen in mudo todobaad laga joogo lagu dilay Magaalada Muqdisho.
Warbixinta ay qortay BBC Hoos ka akhriso.